खोलाले बगाउँदा ताइवानका पर्यटक बेपत्ता ! - खोलाले बगाउँदा ताइवानका पर्यटक बेपत्ता !
खोलाले बगाउँदा ताइवानका पर्यटक बेपत्ता !
२०७५, ३१ भदौ, 03:05:22 AM
कास्की । पदयात्राका क्रममा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेका एक विदेशी पर्यटकलाई खोलाले बगाएको छ । ताइवानका ६६ वर्षीय हुई जू चिइन अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्किने क्रममा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ हिम्कु खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन ।
आठ जनाको समूहमा पदयात्रामा पुगेका पर्यटक चिइन चिप्लेर खोलामा बेपत्ता भएको घान्दु्रक प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक तुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । टोलीमा गाइड र पोर्टर गरी सातजना नेपाली पनि सहभागी थिए ।
शनिबार दिनभर उनको खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकिएको गुरुङ बताउँछन । घटनास्थल प्रहरीचौकीबाट १३ घण्टा पैदल दूरीमा छ । लगातारको वर्षा र साँघुरो खोँच भएकाले खोजीमा कठिनाइ भएको प्रहरीको भनाइ छ ।